Moa Ve Mampiseho Ny Vahiny Iray Mampiasa Herisetra Amin’ireo Mpiasan’ny Hopitaly Frantsay Ity Lahatsary Ity? Tsia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Febroary 2018 7:28 GMT
Mampiseho ny lehilahy iray mampiasa herisetra amin'ny mpiasan'ny hopitaly roa ny lahatsary iray nozaraina in-113.000 tao amin'ny pejy Facebook “SOS manohitra ny fanavakavaham-bolokoditry ny fotsy hoditra ” . “Mikarakaraka azy ireo izahay, ary izany no fomba isaoran'izy ireo anay,” hoy ny fanamarihan'ilay mpanoratra ny lahatsoratra, tsy nisy filazana tamin'ny antsipiriany ny toerana sy ny fotoana nitrangan'ny tantara anefa . Na izany aza, amin'ny teny Rosiana ilay horonantsary, ary, tamin'ny alàlan'ny fikarohana ny sary teo aloha tao amin'ny fandrafetana fototra ny lahatsary no nahafahan'ny CrossCheck namantatra fa tao an-tanàndehibe Rosiana ao Novgorod no nitranga ny tantara.
Ao amin'ireo fanehoan-kevitra eto ambanin'ny lahatsary, maro ireo manontany ny maha-azo antoka sy ny niandohan'ilay lahatsary. Araka ny tranonkala Metronews, nitranga tao Novgorod, any avaratra andrefan'i Rosia ny tantara tamin'ny 23 Febroary 2017. Ny faha 23-n'ny volana Febroary no “Andron'ny Mpiaro ny Tanindrazana” any Rosia izay matetika marihina amin'ny trangana herisetra. Toa tao anatin'ny fahamamoana tanteraka ny lehilahy tompon'andraikitra tamin'io fanafihana io. Nodarohany aloha ny mpiambina, araka ny hita ao amin'ny santionan'ny lahatsary nalefa antserasera tao amin'ny lahatsoratra Metronews. Nanohy izany izy ary nidaroka ny infirmiera iray sy ny infirmiera mpanampy izay nikasa ny hanakana azy. Voatery nampidirina hopitaly ireo vehivavy roa ireo ary tonga nisambotra ilay lehilahy tao amin'ny hopitaly ny polisy. Voampanga ho “nampiasa herisetra ” sy “nampiasa herisetra tamin'ny manampahefana” izy noho izany.
Nozaraina imbetsaka tao amin'ny Twitter ihany koa ny lahatsary.
“Eritreretra ho an'ny mpiasan'ny hôpitaly rehetra, izay tsy maintsy miaritra ireo adala rehetra eto ambonin'ny tany, tonga handray ny fikarakarana ara-pahasalamana maimaim-poana”